Monomethyl auristatin E (MMAE) ntụ ntụ (474645-27-7) ≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Monomethyl auristatin E (MMAE) ntụ ntụ
Rating: SKU: 474645-27-7. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụ ntụ Monomethyl auristatin E (MMAE) (474645-27-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mma.
Monomethyl auristatin E (MMAE) uzuzu uzuzu
Monomethyl auristatin E (MMAE) ntụ ntụ isi agwa
aha: Monomethyl auristatin E (MMAE) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C39H67N5O7
Molekụla arọ: 717.97858
Nchekwa Nche: Na-echekwa na akpa akpa, n'etiti 36 ka 46 ogo F
Monomethyl auristatin E ntụ dị ka onye na-ahụ maka antimitotic
Brentuximab vedotin, MMAE ntụ ntụ
Monomethyl auristatin E ntụ ntụ eji
• Ndị okenye
Monotherapy, 1.8 mg / kg (agaghị aga 180 mg / dose) IV kwa izu 3; ya na chemotherapy, 1.2 mg / kg (agaghị aga 120 mg / dose) IV kwa izu 2.
Monomethyl auristatin E ntụ ntụ (MMAE ntụ ntụ, vedotin) bụ onye nwere ike na-egbochi ọnyá sel site na igbochi polymerisation nke tubulin. Ndị ezinụlọ nke auristatins bụ ihe ana-ekwu nke synthetic nke antineoplastic ngwaahịa ndị dị na Dolastatin 10, ndị na-eme ihe ntanetị nke cytotoxic ultrapotent nke a na-eji agwọ ọrịa dị ka a na-akwụ ụgwọ na conjugates ọgwụ ọjọọ. Monomethyl auristatin E ntụ ntụ ma ọ bụ MMAE ntụpọ bụ 100-1000 ugboro karịa ike doxorubicin (Adriamycin / Rubex) ma enweghị ike iji ya dị ka ọgwụ n'onwe ya. Otú ọ dị, dịka akụkụ nke ọgwụ mgbochi ọgwụ ma ọ bụ ADC, ntụ ntụ MMAE jikọtara ya na mgbochi monoclonal (mAb) nke na-achọpụta otu okwu akara akara na mkpụrụ ndụ kansa ma na-eduzi ntụpọ MMAE na otu mkpụrụ ndụ kansa cancer.
Onye njikọ nke na-ejikọta MMAE ntụ ntụ na mgbochi monoclonal bụ nke na-eme ka ọ dịkwuo mmiri, ma cathepsin na-ejide ya ozugbo onye ọgwụ na-egbochi ọgwụ ọjọọ na-ejikọta mkpụrụ ndụ cancer kansa na-echekwa ya ma banye na kansa cancer, mgbe nke a gasịrị, ADC wepụtara MMAE ntụpọ na-egbu egbu ma mee ka usoro mgbochi mitotic dị ike. Njikọ conjugates na-agwọ ọrịa na-eme ka ọgwụ ndị na-akpata nje ghara ịdị na-eme ka ọ dịkwuo mma ma belata mmetụta ndị na-adịghị mma nke ndị na-eme ihe ike na-eme ka ndị na-egbu nje.
Ịdọ aka ná ntị na Monomethyl auristatin E ntụ
• Pneumonitis, ọrịa na-efe efe, ọrịa ọrịa iku ume
Ọrịa na-arịa ọrịa na-adịghị mma (dịka, pneumonitis, ọrịa na-ekesa ọrịa strok, ọrịa oke mgbagwoju anya na ọrịa strok) na akụkọ brentuximab; ụfọdụ ndị na-egbu egbu. Nyochaa ndị ọrịa maka ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke toxicity dị ka ụkwara na dyspnea. Nyochaa ndị ọrịa na-azụlite mgbaàmà mgbaàmà ọhụrụ ma ọ bụ na-arịwanye elu; jide brentuximab ruo mgbe oganihu dị mma. A na-ejikọta brentuximab na-ejikọta chemotherapy nke na-ahụ maka ọbara ọbara, dịka ABVD (adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) n'ihi ụba dịkwuo nke ọrịa nchịkwa na-adịghị emerụ ahụ. Mgbagha nke mbụ na / ma ọ bụ mbufụt (nke dị na X-ray ma ọ bụ na-enyocha ihe ọmụma na-abanye n'ime ya) mere ọtụtụ ugboro na ndị ọrịa lymphoma Hodgkin bụ ndị natara brentuximab tinyere ABVD n'ọgwụgwụ ikpe jiri ya tụnyere akụkọ nlekọta nke ndị ọrịa bụ ndị natara ABVD naanị. Ọtụtụ ikpe kpebisiri ike ịgbaso ọgwụgwọ corticosteroid.
Neuropathy na-ahụ maka ụlọ
Ọ bụ ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-adịghị mma, bụ ọrịa na-adịghị mma, bụ nke a na-akọ banyere ọgwụgwọ brentuximab vedotin; enweghi neuropathy gburugburu. Nyochaa ndị ọrịa maka mgbaàmà nke neuropathy (dịka, hypoesthesia, hyperesthesia, paresthesia, obi erughị ala, ihe ọkụ ọkụ, neuropathic mgbu, ma ọ bụ adịghị ike). Akwụsịtụ ọgwụgwọ, nkwụsị nke ụbụrụ, ma ọ bụ ịkwụsịlata nwere ike ịdị mkpa na ndị ọrịa na-azụlite neuropathy ọkpụkpụ ọhụrụ ma ọ bụ na-aka njọ.
Ọrịa hematologic siri ike (dịka, anaemia, thrombocytopenia, neutropenia) na ikpe na-egbu egbu nke febrile neutropenia ka a kọọrọ ya na ọgwụ bveduximab vedotin; a nwere ike ịgbatị neutropenia (izu 1 na-adịgide adịgide ma ọ bụ karịa). Ndị ọrịa Geriatrịa afọ 65 na ndị toro eto na lymphoma Hodgkin bụ ndị natara breduximab vedotin na ọgwụ na-ahụ maka ahụhụ na-arịwanye elu nke ferople neutropenia jiri ya tụnyere ndị ọrịa na-eto eto. Rata uru ọbara zuru ezu tupu oge ọ bụla nkeji ọ bụla na ugboro ugboro ma ọ bụrụ na 3 ma ọ bụ 4 neutropenia na-emepụta; nyochaa ndị ọrịa niile maka ahụ ọkụ. Nkwụsị nke ọgwụgwọ, nkwụsịtụ usoro, ma ọ bụ ịkwụsịlata nwere ike ịdị mkpa na ndị ọrịa na-azụlite 3 ma ọ bụ 4 neutropenia; tụlee ihe mgbakwunye nke ihe na-akpali akpali (G-CSF) nke prophylactic na-edozi. Onye na-elekọta G-CSF na-amalite site na 1 na-arị elu na ndị ọrịa na-anata breduximab vedotin na nchịkọta na chemotherapy.
A kọwo ụbụrụ na-agwọ ọrịa Tumor (TLS) na ndị ọrịa na-enweta breduximab vedotin. Ndị ọrịa na-ebuwanye ụbụrụ na-arịwanye elu na / ma ọ bụ nnukwu nsogbu nke ụbụrụ nwere ike inwe nnukwu ihe ize ndụ nke ịmalite TLS. Nyochaa ndị ọrịa maka ihe ịrịba ama nke TLS (dịka, ọgwụ electrolytes, uric acid, ọbara creatinine) tupu na usoro ọgwụgwọ; ulo akwukwo ihe kwesiri ime na ọgwụgwọ (dika, hydration, uric acid lowering therapy) dika odi mkpa.
• Ọganihu multifocal leukoencephalopathy
A na - akọ na ọrịa ọjọọ nke na - arịwanye elu nke leukoencephalopathy (PML), nke John Cunningham virus (virus JC) mere, na ọgwụgwọ brentuximab; ụfọdụ mere n'ime ọnwa 3 mbụ na-amalite usoro ọgwụgwọ. Ndị ọrịa nwere ọgwụgwọ immunosuppressive na mbụ ma ọ bụ ọrịa immunosuppressive nwere ike ịbụ ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa nje JC na PML. Nyochaa ndị ọrịa na-azụlite ihe omuma ọhụrụ nke anụ ahụ, nke nwere ike ịchọpụta, ma ọ bụ àgwà na mgbaàmà dịka mgbanwe na ọnọdụ ma ọ bụ omume; mgbagwoju anya; ncheta ncheta; mgbanwe n'ọhụụ, okwu, ma ọ bụ ije ije; na / ma ọ bụ ebelata ike ma ọ bụ adịghị ike n'otu akụkụ ahụ. Jide ọgwụ ma ọ bụrụ na PML na-enyo enyo; kwụsị na iri abụọ na ndị ọrịa na PML kwadoro.
• Mmetụta ahụ mgbochi
Zere iji brentuximab vedotin na-arịa ọrịa nwere nnukwu mmerụ ahụ (creatinine clearance (CrCl) na-erughị 30 mL / min). Mmetụta nke 3 ọkwa ọkwa ma ọ bụ ihe ndị ka njọ ma ọ bụ ọnwụ dị elu karịa ndị ọrịa nwere nkwarụ siri ike ma e jiri ya tụnyere ndị ọrịa na-ahụkarị (CrCl karịa 80 mL / min) na obere ọgwụ pharmacookinetic.
• Ọrịa Hepatic
Zere iji brentuximab vedotin na ndị ọrịa nwere oke (Child-Pugh B) ma ọ bụ siri ike (Child-Pugh C) ọrịa / ọrịa na-ekesa ọrịa; a na-atụ aro ka a malite ịmalite ịmalite iji mee ka ndị ọrịa nwee nsogbu adịghị mma na-adịghị na ya (Child-Pugh A). Ihe omume nke 3 nke XNUMX ma ọ bụ ihe ndị ka njọ ma ọ bụ ọnwụ dị elu karịa ndị ọrịa nwere ọrịa na-adịghị mma ma ọ bụ dị njọ ma e jiri ya tụnyere ndị ọrịa na-arụ ọrụ na-agwọ ọrịa na-ahụkarị n'ime nnyocha pharmacokinetic. A na - akọ akụkọ banyere ọrịa ahụ (eg, ọrịa hepatocellular, enzymes dị elu hepatic, na hyperbilirubinemia) na ọgwụ bveduximab vedotin. A na - eme ụfọdụ mgbe emechara nke mbụ ma ọ bụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ; a kọọwo ọnwụ metụtara ọrịa na-egbu egbu. Nyochaa nyocha ọrụ imeju (LFTs), gụnyere bilirubin, tupu na n'oge ọgwụgwọ. Nkwụsịtụ ọgwụgwọ, nkwụsịtụ usoro, ma ọ bụ ịkwụsịlata nwere ike ịdị mkpa na ndị ọrịa na-azụlite ọganihu ọhụrụ, na-akawanye njọ, ma ọ bụ na-arịwanye elu hepatotoxicity. Ndị ọrịa nwere ọrịa ọrịa na-ekesa ọrịa ma ọ bụ ndị LFT dị elu n'oge gara aga ma ndị ọrịa ndị na-enweta ọgwụ ndị nwere ike ịdọrọ nwere ike ịbụ ihe ize ndụ dị ukwuu maka ịmelite hepatotoxicity.
• Ọrịa, ọnyá
Ọrịa ohere na ọrịa ndị ọzọ dị njọ, gụnyere ọrịa oyi n'ahụ, nje bacteria, na ọkpụkpụ (ụfọdụ ndị na-egbu egbu), kọọrọ akụkọ ọgwụgwọ breduximab vedotin. Jiri nlezianya nyochaa ndị ọrịa n'oge ọgwụgwọ maka ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke nje, nje, ma ọ bụ ọrịa nje.
• Mmeghachi omume nke ihe gbasara mmiri
Mmeghachi ihe metụtara mmiri na-agụnye anaphylaxis ka a kọọrọ site na brentuximab vedotin ọgwụ; Ya mere, nyochaa ndị ọrịa maka ihe mgbaàmà nke mmeghachi omume n'oge mmịnye brentuximab. Ozugbo ma kwụsị ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na anaphylaxis emee. Kwụsị ntinye ọgwụ na nlekọta ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na ndị ọrịa na-emepụta mmeghachi omume yiri nke infusion. Nkọwapụta (dịka, acetaminophen, antihistamine, na / ma ọ bụ corticosteroid) tupu enweghi mmerụ ahụ na ndị ọrịa bụ ndị nweburu mmeghachi omume yiri nke infusion.
• Mkparịta ụka, ọbara ọgbụgba GI, ọrịa GI, igbochi GI, nhụpụ nke GI, ileus, ọrịa na-egbu egbu nke peptic
Ihe mgbaàmà nke Gst (GI) gụnyere GI perforation, GI ọbara ọgbụgba, GI mbukpọ, ọrịa peptic ọnyá afọ, GI igbochi, neutropenic colitis, enterocolitis, na ileus na-akọ na brentuximab vedotin ọgwụ; ụfọdụ kpatara ọnwụ. Jiri nlezianya nyochaa ma mesoo nsogbu GI na ndị ọrịa na-azụlite mgbaàmà GI ọhụrụ ma ọ bụ na-akawanye njọ. Jiri nlezianya jiri nlezianya na ndị ọrịa nwere akụkọ banyere ọrịa GI. Ndị ọrịa nwere akụkọ ihe mere eme nke lymphoma na itinye aka na GI nwere ike ịbụ ihe ize ndụ nke GI perforation.
• Ime afọ
Brentuximab vedotin nwere ike ịkpata nsogbu nwa ebu n'afọ ma ọ bụrụ na a na-elekọta ya mgbe ọ dị ime na-adabere na usoro ọrụ na data sitere na ọmụmụ ụmụ anụmanụ. E kwesịrị ịdọ ndị inyom nke ịmụ nwa ume ka ha ghara ịtụrụ ime mgbe ha na-anata brentimesimab. Ọ bụrụ na nwanyị dị ime mgbe ọ na-aṅụ ọgwụ ọjọọ a, ọ ghaghị ịmara na nwa ebu n'afọ ga-enwe nsogbu. N'ọmụmụ anụmanụ, embray-fetal na-egbu egbu gụnyere ọrịa nkwarụ na-ahụkarị na iri abụọ na abụọ na-ebute ihe ngosi nke nne na-emetụta ihe ngosi mmadụ na-atụ aro.
• Mgbochi ọgwụgwọ, infertility, teratogenicity nke ndị nwoke, nyocha nke afọ ime, ihe ọmụmụ nwa
Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ banyere ihe ọmụmụ na imepụta ọgwụ mgbochi n'oge a na-agwọ ọrịa bveduximab. A ghaghị ịrụ ule ime nwa tupu ịmalite brentuximab n'ime ndị inyom nwere ike ịmụ nwa. Ndị ọrịa a kwesịrị iji ọgwụ mgbochi dị irè ma zere ime ime n'oge nakwa maka ma ọ dịkarịa ala ọnwa 6 mgbe ọgwụgwọ iri abụọ gasịrị. Ụmụ nwanyị na-atụrụ ime mgbe ha na-anata iri abụọ ga-achọpụta na nwa ebu n'afọ ga-enwe nsogbu. Tụkwasị na nke a, ndị nwoke na-arịa nwanyị nke nwere ike ịmụ nwa ga-eji ọgwụ mgbochi dị irè n'oge ọgwụgwọ nakwa maka ma ọ dịkarịa ala ọnwa 6 mgbe a gwọchara ya n'ihi ihe ize ndụ nke teratogenicity nke nwoke. Dabere na ọmụmụ ụmụ anụmanụ, brentuximab nwere ike ime ka ụmụ nwoke ghara ịmụ nwa.
• Nri ara
Enweghị ihe ọmụma banyere ọnụnọ nke brentuximab vedotin na mmiri ara ehi mmadụ, mmetụta dị na nwa ara, ma ọ bụ mmetụta na-emepụta mmiri ara. N'ihi na enwere ike ime mmeghachi omume dị njọ na nwa ọhụrụ (dịka, cytopenias na ọrịa nhụjuanya ma ọ bụ ọrịa nhụjuanya), a naghị atụ aro ịmị ara nye n'oge ọgwụgwọ brentuximab. Tụlee uru nke inye nwa ara, ihe ize ndụ nke inwe ike ịmịnye ụmụaka, na ihe ize ndụ nke ọnọdụ a na-agwọghị ma ọ bụ nke a na-emeghị nke ọma. Ọ bụrụ na nwatakịrị na-enye nwa ara nwere nsogbu ọjọọ metụtara ọgwụ na-enye nne, ndị na-elekọta ahụike na-agba ume ka ha kọọ mmetụta ọjọọ na FDA.
Monomethyl auristatin E uzuzu (MMAE ntụ ntụ) bụ nke a sụpụtara SGN-35 n'ime sel CD30 + na, n'ihi akpụkpọ ahụ ya, nwere ike ịrụ ọrụ cytotoxic na sel ndị dị n'akụkụ ya. Mkpụrụ MMAE ghọtara mkpụrụ ndụ kansa cancer na-egbuke egbuke na IR na usoro ihe omume na ụbụrụ na-ejikọta ya na njide mota. A na-egosi radiosensitization site na ntanarị clonogenic na abawanye DNA okpukpu abụọ n'ime ụlọnga irradiated.
Monomethyl auristatin E Esi Ike
Monomethyl auristatin E Ntụ ntụ ntụ ntụ
Monomethyl auristatin E ntụ ọka Marketing
IV. Otu esi azụta Monomethyl auristatin E uzuzu; ịzụta MMAE ntụ ntụ si AASraw?